१४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम टार्न यो जोडीको यस्तो हर्कत ! – live 60media
१४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम टार्न यो जोडीको यस्तो हर्कत !
एजेन्सी । लकडाउनको समयमा विश्वभरवाट अनौठा समाचार पनि बाहिर आएका छन् । विश्वका धेरै विवाह योग्य उमेर भएका युवायुवती लकडाउनका कारण विवाह गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुको विवाहको कार्यक्रम लकडाउनका कारण पछाडी सरेको छ ।
सहज वातावरणको पर्खाइमा धेरै युवायुवती बसेका छन् । तर कतै भने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितमीमा पनि आफ्नो चाहना पुरा गरेका उदाहरण देखिएका छन् । लकडाउनका समयमा हजारौं युवायुवतीका विवाह पनि भएका छन् ।
नेपालमै पनि त्यस्ता विवाहको समाचार बाहिरिएका छन् । लकडाउनको समयमा सामाजिक दुरी कायम राखेर सामान्य तरिकाले विवाह सम्पन्न भइरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा विवाहको एउटा अचम्म लाग्दो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । लकडाउनको अप्ठेरो परिस्थितीलाई छिचोल्दै एक जोडीले सिमानामा नै विवाह गरेका छन् । भारतलको यो तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीकै अगाडी उनीहरुले एक अर्कालाई बरमाला लगाएका छन् । त्यहाँ जन्ती पण्डीत कोही पनि छैन । उपस्थितहरुलाई स्यानिटाइजर र माक्स दिइएको छ । अप्ठ्यारोलाई छिचोल्दै एक जोडीले सीमानामा नै गरेको विबाहले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । खबर हो भारतको ।
१४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमलाई टार्न केरला र तामिल नाडुको सिमानामा यो जोडिले विवाह गरेका हुन् । बेहुला रोबिनसन र बेहुली प्रियंकाले एक अर्कालाई बरमाला लगाएर विवाह गरे । उनीहरुको यस्तो जुक्तिको विषयमा अहिले तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेका छन् ।
विबाह समारोहका अवसरमा उपस्थित सबैलाई स्यानिटाइजर र मास्क अनिवार्य गरिएको थियो। कोरोनाको जोखिम हुने भएकाले उक्त विवाह पुरोहित बिना नै सम्पन्न गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
विवाहमा दुवै तर्फका परिवार पनि उपस्थित थिए । एक राज्यबाट अर्को राज्यमा जाँदा १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम भारतमा छ । एक जिल्लावाट अर्को जिल्लामा जन्ती लिएर जाँदा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले यस्तो जुक्ति निकालेका हुन् । बेहुला रोबिनसन र बेहुली प्रियंकाले सल्लाहमा सिमानामा विवाह गरेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
← ११ महिने बालक कोरोना जितेर महाकाली अस्पतालबाट डिस्चार्ज
सुशान्तको परिवारमा अर्को बज्रपात, देवरको मृत्युको पीडाले भाउजुको पनि निधन →